Space X ရဲ့ အနာဂတ် အာကာသခြေလှမ်းသစ်များ – Curiosity
Home /Space X ရဲ့ အနာဂတ် အာကာသခြေလှမ်းသစ်များ
Space X ရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Elon Musk အီလွန်မတ် က အင်္ဂါနေ ့က Falcon heavy ဒုုံးပျံ ပထမဆုံုးစမ်းသပ် ပျံသန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် Space X ရဲ့ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းများကိုု ပြောကြားသွားပါတယ်..။
ဒီနှစ် အတွင်းတော့ Falcon heavy ကိုုသုံုးကာ ဆက်သွယ်ရေးဂြိုလ်တုုများ အမေရိကန်လေတပ်အတွက် ဂြိုလ်တုုများကိုု လွတ်တင်ပေးရန်ရှိတယ်လိုု့သိရပါတယ်။
ဒီဒုံုးပျံဟာ ကြီးမားတဲ့ လေ့လာရေးဂြိုလ်တုု များကိုပင် ပလူတိုု ဂြိုလ် အရောက်အထိ လွတ်တင်ပေးနိုုင်မယ်လိုု့လဲ ဆိုုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အီလွန် ရဲ့ အဓိက အိပ်မက်ကတော့ လူသား တွေ လိုုက်ပါတဲ့ အာကာသယဉ်လွတ်တင်ရေးဖြစ်ပြီး… အင်္ဂါဂြိုလ် Mars ကိုုသွားရန်ရည်ရွယ်တယ်လိုု့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဒီလိုုသွားဖိုု ့အတွက် ဒီထက်ကြီးတဲ့ ဒုံုးပျံယဉ်လိုုပါမယ်…ဒီအတွက်တော့ ကျတော် တိုု ့က Big Falcon Rocket BFR ကိုုတည်ဆောက်မှာပါ..ဒီဒုံုးပျံက ပေ ၁၆၀ လောက်ရှည်တဲ့ အာကာသယဉ် နဲ ့လောင်စာ လူသူတွေ ကိုု အင်္ဂါဂြိုလ်အထိပိုု့ပေးပါလိမ့်မယ်..။” ဟုုပြောကြားခဲ့တယ်။ ဒီလိုု ခရီးဟာ လပေါင်းများစွာကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လဲ ဘယ်တော့ ဆိုုတဲ့ အချိန်သတ်မှတ်ချက်တော့ အတိအကျသိရှိရခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
အသစ်တည်ဆောက်မယ့် Big Falcon Heavy ဒုုံးပျံ ညာ အစွန်ပုံု
လက်တလောမှာ တော့ Space X ဟာ နိုုင်ငံတကာ အာကာသစခန်း International Space Station ကိုု လူလိုုက်ပါသော ယဉ်လွတ်နိုုင်ဖိုု့ကြိုုးပန်းနေတယ်လိုု့ သိရပါတယ်။ ထိုုယဉ် ကိုု လူပါသော Dragon အာကာသယဉ် Crew Dragon လို ့ခေါ်ပြီး…Space X ဟာ များမကြာခင် အာကာသထဲ လူလွတ်နိုုင်တဲ့ ပထမဆုံုးသော အစိုုးရမဟုုတ်တဲ့ ကိုုယ်ပိုုင် company တခုုဖြစ်လာတော့မှာပါ။
(Ref:Jethro Mullen report, CNN Tech)
PhD Fellow at Shinshu University
I amaMedical doctor, now studying PhD degree in Japan. I usually post about Medicine, General Science, Cosmology, History, Philosophy and Aviation. If you interested in these subjects please kindly follow me.
Latest posts by Thi Ha (see all)
လူတယောက် အသက်ရှင်ရန် ဦးနှောက် ဟာ မရှိမဖြစ်လိုုအပ်ပါသလား - February 15, 2018
Space X ရဲ့ အနာဂတ် အာကာသခြေလှမ်းသစ်များ - February 9, 2018
TAGS: Big Falcon Rocket Elon Musk Falcon Heavy Space X